आईआरएसबाट ट्याक्स फाइलको मिति घोषणा, फेब्रुअरी १२ देखि सुरु
❒ आईआरएसबाट ट्याक्स फाइलको मिति नियमितको तुलनामा ढिलो घोषणा, फेब्रुअरी १२ देखि कागजी र विद्युतीय ट्याक्स फाइल स्वीकार्न सुरु गर्ने ❒ सकभर विद्युतीय रुपमा नै ट्याक्स फाइल गर्न सुझाव, राहत चेक नपाएकाहरुले उक्त रकम क्रेडिट वा रिफण्डका रुपमा पाउने ❒ बेरोजगारी विमा वा महामारी बेरोजगारी सहायताको रकम रिपोर्ट गर्नुपर्ने, ट्याक्स विथहोल्ड नगरेकाहरुले रकम तिर्नुपर्ने ❒ निशुल्क ट्याक्स
सुरक्षाको कारण देखाउँदै युएससीआईएसबाट जनवरी १९ र २० का सबै अप्वाइन्टमेन्ट रद्द
❒ अप्वाइन्टमेन्ट लिएका व्यक्ति र युएससीआईएसका कर्मचारीहरुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर युएससीआईएसका फिल्ड अफिसहरु, एसाइलम अफिसहरु, बायोमेट्रिक लगायतका सुविधा दिने एप्लीकेशन सपोर्ट सेन्टरहरुमा सबै अप्वाइन्टमेन्टहरु रद्द ❒ जनवरी १९ र २० मा अप्वाइन्ट तय भएकाहरुका लागि युएससीआईएसले अर्को अप्वाइन्टमेन्ट तय गरेर सुचित गर्ने, युएससीआईएसको वेवसाइट र सम्पर्क केन्द्रहरु भने सम्पर्कका लागि
2021 Tax Filing Season Begins Feb. 12, IRS Outlines Steps to Speed Refunds
❒ The IRS is delaying the start of the 2020 tax filing season to Feb. 12, filing deadline is still April 15. ❒ IRS Free File opens. Taxpayers can begin filing returns through Free File partners; tax returns will be transmitted to the IRS starting Feb. 12. Tax software companies also are accepting tax filings in advance. ❒ Advance stimulus payments received separately are not
पाँचथर ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्ताहरुलाई आह्वान गर्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) द्वारा शुक्रबार फिदिममा आयोजित बृहत् कार्यकर्ता भेलामा उहाँले ताजा जनादेशबाट मुलुकलाई निकास दिनुको विकल्प नरहेको वताउनुभएको हो । “नेकपाकै बहुमत रहे पनि सरकारले काम गर्न नसक्ने स्थिति निर्माण गरिएपछि दुई वर्ष किन खेर
डोल्पा ।डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट वन्यजन्तु जस्तो देखिने आखेटोपहार र भरुवा बन्दुकसहित पाँच जना पक्राउ परेका छन् । चोरी शिकारी नियन्त्रण एकाइले त्रिपुरासुन्दरी
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । शनिबार देशभरको मौसम सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । शनिबार न्यूनतम तापक्रम केही घटेको काठमाडौं
मेष – पुरानो फाइदा मिल्नेछ । वित्तीय कारोवार बढ्नेछ । कृषिबाट आम्दामी हुनेछ । वृष – घरायसी काममा प्रगति हुनेछ । मान सम्मान पाइनेछ । राजनीतिक पद लाभ मिल्नेछ । मिथुन
तपाई बिहान उठेर केके गर्नुहुन्छ ? यस्ता कामहरु गर्नुभएको छैन भने अब देखि बिहान बिहान यस्ता कार्यहरु गर्नुहोस् । तपाईको घरमा कहिल्यै पैसाको कमी हुनेछैन । भाग्य चम्किने छ । घरमा सुख समृद्धि बनाइराख्नको लागि हाम्रा पूर्वजहरुले पहिलेदेखी
ट्रम्पले बाइडेनको सपथग्रहणभन्दा केही घण्टा अगाडि नै ह्वाइटहाउस छाड्ने
❒ ट्रम्पले बाइडेनको सपथग्रहण भन्दा केही घण्टा अगाडि नै ह्वाइटहाउस छाड्ने, मेरिल्याण्डमा रहेको सैन्य क्याम्पमा केहीबेर रोकिएर कमाण्डर इन चिफका रुपमा अन्तिम सम्बोधन गर्ने ❒ नव निर्वाचित राष्ट्रपतिको सपथमा सहभागी नहुने ट्रम्पमात्र पहिलो राष्ट्रपति भने होइनन्, जोन आडम्स, जोन क्वीन्सी आडम्स र एन्ड्रयु जोन्सन पनि नव निर्वाचित राष्ट्रपतिको सपथमा सहभागी भएका थिएनन् । ❒ जनवरी
काठमाडौं । भारतले कोरोनाविरुद्धको खोप आजदेखि सर्वसाधारणलाई लगाउन शुरु गर्दैछ । स्थानीय समयअनुसार बिहान साढे १० बजे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खोप अभियानको उद्घाटन गर्ने
बागलुङ । संरक्षण अभावमा जीर्ण बनेको गलकोट नगरपालिका–५ बसाहफाँट र वडा नं ६ मजुवाफाँट जोड्ने झोलुङ्गे (राजाक) पुल पुनःनिर्माण गरिएको छ । चौबीसे राज्यअन्तर्गत तत्कालीन गलकोटे राजा भरतबम मल्लका पालामा बनेको उक्त झोलुङ्गे पुल अहिले पनि ‘राजाको पुल’ ले चिनिन्छ । वडा नं ५ का वडाध्यक्ष नारायणध्वज मल्लका अनुसार सो झोलुङ्गे पुल विसं १९९० को दशकमा निर्माण गरिएको थियो । पुल पुनःनिर्माणका
काठमाडौँ । विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियरतर्फको बरियतामा नेपालका खेलाडी प्रिन्स दाहालले छलाङ मार्नुभएको छ । विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घले शुक्रबार जारी गरेको जुनियरतर्फको बरियताअनुसार दाहाल तेस्रो स्थानमा उक्लिनुभएको छ । यसअघिको बरियतामा दाहाल सातौँ
सिमकोट । हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकास्थित मेल्छाम प्रहरी चौकीमा कार्यरत हवल्दार देवेन्द्र खड्काको माथिबाट खसेको
वीरगञ्ज । छिमेकी मुलुक भारतले पाम आयलमा प्रतिबन्ध लगाएपछि पर्सा, बारामा रहेका ९० प्रतिशत तेल उद्योग धरासायी हुँदै गएको छ । भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यहाँका अधिकांश तेल उद्योग धरासायी भएको हो । पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यावसायीहरुको ठूलो लगानी जोखिममा परेको छ । पाम आयलको माग भारतमा उच्च छ । नेपालबाट निकास हुने प्रमुख वस्तुमध्ये एक पाम तेल नै हो । आर्थिक
भारत किसान आन्दोलनः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कसरी भारतीय किसानहरूको आक्रोश बुझ्न सकेनन्
झन्डै ५० दिन लामो प्रदर्शन र सरकारसँगको आठ चरणको वार्तापछि पनि भारतीय किसानहरूले डगमग गर्न मानेनन्। कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, विक्री र भण्डारणसम्बन्धी तीनवटै कानुन फिर्ता नलिँदासम्म राजधानी दिल्लीमा विरोधको स्वर गुन्जाइरहेका आन्दोलनकारी किसान पछि हट्न तयार छैनन्। सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे परेका केही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै ती कानुनमा अस्थायी रोक लगाइदिएको छ। तर अन्योल बढ्दो छ।
खगोलशास्त्र: सन् २०२१ का मुख्य आकर्षण
नयाँ वर्ष, नयाँ तारामण्डल अवलोकनका योजना! यदि तपाईँ रातमा आकाश अवलोकन र अन्तरिक्ष अवलोकनको पारखी हुनुहुन्छ भने अहिलेदेखि नै योजना बनाउन थाल्नूस् है किनभने सन् २०२१ रोमाञ्चक र सुन्दर खगोलशास्त्रीय दृश्य र घटनाले भरिपूर्ण हुनेछ। नजिकका आकाशगङ्गाहरू, खग्रास चन्द्रग्रहण, आगोका लप्काका घेराहरू, उल्कापात, मङ्गल ग्रहमा अवतरण गर्न उडिरहेका लागेका दुईवटा अन्तरिक्ष यानहरू र अन्तरिक्ष
दमौली । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटनको मुद्दामा न्यायाधीशहरुले देशको हितमा निर्णय गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभएको छ । प्रजातन्त्र
विश्वभर २० लाख १६ हजार जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु, ६ करोड ७२ लाख निको
एजेन्सी । शनिबार बिहानसम्ममा ६ करोड ७२ लाख ९९ हजार ९० जना संक्रमित कोरोनामुक्त भएका हुन् । हालसम्म विश्वमा ९ करोड ४२ लाख ४५ हजार २७४ जनामा
खोटाङ । दुवै मिर्गौलापीडित ५२ वर्षीय कृष्ण खत्रीको औषधि उपचारमा समस्या देखिएको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–५ स–छितापोखरीका खत्रीको औषधि उपचारमा समस्या देखिएको हो । हप्तामा दुईपटक मिर्गौलाको डायलासिस गराइरहनुभएका खत्रीका दुवै मिर्गौला काम नलाग्ने भएको छ । “वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल काठमाडौँमा चार वर्षदेखि डायलासिस गराइरहेको छु”, उहाँले भन्नुभयो । चार वर्षदेखि दुवै
भरतपुर । चितवनको कालिका नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । जुटपानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गरी कालिका नगर अस्पताल सञ्चालन गरिएको हो । वडा नं ६ खोलेसिमलमा